HTC utiliza un iPhone6para realizar la foto promocional de un HTC One M9 | Androidsis
HTC သည်ပြန်လည်တူးဖော်ခြင်း - HTC One M6 Gold Edition ၏အထူးဓာတ်ပုံရိုက်ယူရန် iPhone9ကိုအသုံးပြုပါ
ငါ HTC အကြောင်းကိုတကယ်နားမလည်ဘူး လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းရောင်းအားကျဆင်းမှုကြောင့်ထိုင်ဝမ်ထုတ်လုပ်သူသည်အကောင်းဆုံးအချိန်ကိုဖြတ်သန်းနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ လက်ရှိထိုင်ဝမ်ထုတ်လုပ်သူ၏အဓိကစွမ်းဆောင်ချက်မှာ၎င်းပရိုဆက်ဆာ၏ပြproblemsနာများဖြစ်သောအငြင်းပွားဖွယ် Qualcomm Snapdragon 810 ကြောင့်ဝေဖန်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ HTC One M9 ကင်မရာနှင့်၎င်း၏ဒီဇိုင်းသည်၎င်း၏ယခင်ပုံစံနှင့်ခြေရာခံနိုင်မှုကိုအလွန်အမင်းကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားသည်။
ဆင်တူသည်နှင့် HTC ယောက်ျားများကိုယ်တိုင်မြှင့်တင်ရန်မှားခဲ့သည် htc ကမှားတယ်။ သူတို့သင်ခန်းစာယူခဲ့ပြီလား။ ငါပြောတာမဟုတ်ဘူး ကျနော်တို့၏မြှင့်တင်ရေးပုံရိပ်ကိုမြင်ရလျှင်ပို ၂၄ ကာရက်ရှိ HTC One M9 ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ဖန်တီးခဲ့သည်။ တရားဝင်ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ iPhone6ကိုသုံးပြီး Apple ဖုန်းကိုရောင်ပြန်ဟပ်ခဲ့တယ်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ဒီအမှားတချို့ခေါင်းတွေကိုလှိမ့်စေရန်ဖြစ်ပါသည်။
၂၄ ကာရက်ရှိ HTC One M6 ၏မြှင့်တင်ရေးဓာတ်ပုံကိုယူရန် HTC သည် iPhone9ကိုအသုံးပြုသည်
ငါတကယ်အခြေအနေ, အဖြစ်သူတို့အမှားတွေဘယ်လိုလုပ်နိုင်ပုံကို, နားမလည်ကြဘူး။ သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်ကတော့သုံးစွဲသူတွေအကြောင်းဟာသလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့တွစ်တာအကောင့်ပေါ်ရှိမြှင့်တင်ရေးပုံရိပ်ကိုပြောင်းလဲလိုက်ပြီဖြစ်ပေမယ့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပြီးသားဖြစ်သည်။ သူတို့နှုန်းဟာသူတို့ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုသန့်ရှင်းအောင်လုပ်ဖို့အလေးအနက်ထားနိုင်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » HTC သည်ပြန်လည်တူးဖော်ခြင်း - HTC One M6 Gold Edition ၏အထူးဓာတ်ပုံရိုက်ယူရန် iPhone9ကိုအသုံးပြုပါ
Diego Domiguez Ymodaba ဟုသူကပြောသည်
Diego Domiguez Ymodaba ကိုပြန်သွားပါ
Jesus Joaquin Gwyddyon ဟုသူကပြောသည်
လမ်းပေါ်မှာဒါပေမယ့်အခု !!! ဟားဟား
ဟိုဆေး Noguera ဟုသူကပြောသည်
သတင်းဟောင်း !!!! နောက်တစ်ခု !!!!
Jose Noguera ကိုပြန်သွားပါ
Huawei P8 Max သည်အကြီးမားဆုံး Huawei P8 ဇွန်ကိုဇွန်လ ၂၄ ရက်တွင်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်
APUS Browser၊ မြန်ဆန်ရိုးရှင်းလွယ်ကူသော web browser ဖြစ်သည်